DALKII IYO CALANKII AAN U NAAFOOBAY AYAA LAYGU HOOS DULMIYEY
Tuesday February 16, 2021 - 17:05:54 in Maqaallo by Wariye Tiriko
"Waxaan ka mid ahaa naftood horayaashii SNM ee soo galay magaalada Burco 27 May 1988 dii’’
Magacaygu waaJAAMAC CALI X.CABDIku magac dheer (jaamac gaas)
Waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ka dhiidhiyey tacdigii iyo gumaadkii dawladii militariga ahayd ku haysay shacab waynaha Somaliland.
Waxaan ka mid ahaa guutadii Burco soo gashay 1988 , sidoo kale waxaan ku jiray dagaaladii jiidaha bariga ee lagu ridayey kaligii taliyihiin siyaad barre .
Dagaaladaas aan galay waxaa iga soo gaadhay dhaawacyo qaarkood aan naafo u noqday , mana aan helin dhakhtar.
Sanadii 2007 dii ayaan ka qayb galay imtixaan loo galayey boosas shaqo ka banaanaaday wasaarada Boosaha iyo Isgaadhsiinta JSL qaybteeda magaalada Burco ,waxaanan ka mid noqday sadex qof ku guulaystay anigoo kaalinta 2aad galay.
Waxaan sidaa kaga midnoqday shaqaalaha wasaarada Boosaha iyo Isgaadhsiinta oo iminkana magaceedii loo badalay(wasaarada Isgaadhsiinta iyo technologyada).
Sanadkii 2011 kii ayaa aniga oo aan waxba ogayn laykeenay warqad sheegaysa inaan gaadhay da,da hawlgabka, waxaanay igu noqotay yaab aniga iyo shaqaalihii aan wada shaqaynaynaba.
Cida hawlgabka iga gudbisayna waxaa uu noqday isuduwahaygii xiligaas.
Waxaan u dacwooday wasiirkii xiligaas ee wasarada Isgaadhsiinta iyo technologyada waxaanu ka garaabay cadaaladarada laygu sameeyey laakin isagoo aan waxba ka qaban ayuu xilka ka tagay.ilaa shan wasiir ayaa isu badalay wasaarada intii dacwadaydu taagnayd markii ugu danbaysana waxa laygu yidhii waxaa lagu siinayaa mushaharkaagii oo dhan intii sanadood ee kaa maqnayd laakin taasna weli mahayo.
Sanadkii 10aad ayaan weli cadaalad sugayaa.
Waxaan ka codsanayaa madaxda qaranka JSL oo uu ugu horeeyo Madaxweynuhu iyo dhamaan madaxda wasaarada Isgaadhsiinta iyo tignoolijiyada JSL in arinkaygaa hoos loo eego waxna laygala qabto.
Jaamac Cali X. Cabdi (Jama gas)